दुर्घटना किन यस्तो बढेको ? - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
पाठेघर क्यान्सर सम्बन्धी एक हप्ते जनचेतना कार्यक्रम
व्यापार संघको रक्तदान
पेमेन्ट गेट वे बारे अन्र्तक्रिया
उद्यमी व्यवसायीका कुरा
विविध/ पाठक प्रतिक्रिया
दुर्घटना किन यस्तो बढेको ?
प्रकाशित मिती : मङ्लबार, साउन ९, २०६९ by admin · Comments
२०६९ असार ३० गते शनिबार बिहानै काभ्रेवासीले दुई जना शिक्षकलाई गुमाउनु परेको समाचारपछि दुर्घटनाका त्रासदीपूर्ण समाचारहरु सुन्नु परेको छ । ३० गते विहान ६ः४५ बजे सहचालकले लापरवाही तरिकाबाट चलाएको बसले पैदल यात्रा गरेका डेगराज भट्टराई, नवराज तिमल्सिनालाई किच्दा डेगराजको घटनास्थलमा र नवराजको उपचारका क्रममा मृत्युको समाचारसँगै ३१ गते भारतबाट तीर्थयात्राका लागि आएको बस नवलपरासीको नहरमा डुब्दा ३९ जना यात्रुको मृत्यु भयो । साउन १ गते बिहानै उदयपुरबाट काठमाडौं आएको बस कृष्णभीरबाट त्रिशुली नदीमा खस्दा १७ जनाको मृत्यु भयो । सोही दिन नवलपरासीमा बस र टिपर एक आपसमा ठक्कर खाँदा ४ जनाको मृत्यु भयो । आइतबार झापा, नवलपरासीमा दुर्घटनाबाट २० भन्दा बढीको मृत्युको संख्या हेर्दा झण्डै १ सय पुग्न लागेको छ । यसरी लगातार सडक दुर्घटना किन हुन्छ ? यसबाट बच्न हामीले के गर्नुपर्ला ?
आदरणीय पाठक महानुभावहरु दुर्घटनालाई रोक्ने पहिलो उपाय नै सावधानी हो । दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो – लापरवाही । सरकारको लापरवाही, प्रहरी प्रशासनको लापरवाही, चालकको लापरवाही, यात्रुको लापरवाही र व्यवसायीहरुको लापरवाहीले दुर्घटनाहरु बढेका हुन् । यसका लागि हामी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट सचेतना फैलाउनुपर्छ । दुर्घटनाको न्यूनीकरणका लागि आजैदेखि म सावधानी अपनाउँछु भनेर आफैले आफैसँग प्रतिबद्धता अपनाएको खण्डमा आधा दुर्घटना हुँदैन । सरकारको यातायात क्षेत्रमा बनाइएका नियम ऐन कानुनहरु थोत्रा भइसकेका छन् । आधुनिक व्यवहारिक र यातायातको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नीति नियम ऐन कानुन सरकारले समय अनुसार नबनाउनु हदैसम्मको लापरवाही हो ।
अर्कातर्फ प्रहरी प्रशासनले दुर्घटनापछि पीडित र पीडक दुवैबाट केही झर्ला र खाउँला भन्ने मानसिकताले हाम्रा अगाडि भएका दुर्घटनाबाट हामीले थाहा पाएका छौं । सरकारको नीति नियमलाई पालना नगराउने प्रहरी र प्रशासनको लापरवाहीले दुर्घटना बढेको भन्न सकिन्छ । चालक यस्तो व्यक्ति हो जसको हातमा धेरै व्यक्तिको ज्यान हुन्छ । ऊ जिम्मेवार नबन्नु जथाभावी चलाउनु ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नु, बस (गाडी) को र सडकको अवस्थाको पूर्व जानकारी नहुनु पनि लापरवाही हो । गाडी चलाउँदा मादक पदार्थ सेवन गर्नु, चुरोट खानु, मोबाइल फोन प्रयोग गर्नु र नजिकै तरुनी राखेर गफिनुले दुर्घटना भएका समाचार छन् । क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्नु थोत्रा सवारी साधन चलाउनु । ड्राइभिङमा दक्ष नभई सिकारुले चलाउनु र सक्षम भए पनि अस्वस्थ र सवारी चलाउँदा निदाउनुले पनि धेरै दुर्घटना भएका छन् । त्यसैले पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्नु सडकको दायाँबायाँ जहाँ पनि पार्किङ गर्नुले पनि दुर्घटना भएका छन् । व्यवसायीले पनि आफ्नो सवारी साधन चालकका बारेमा पूर्व जानकारी नहुँदा दुर्घटना भएका छन् ।
सरकार, प्रहरी प्रशासन, चालक, यात्रु, व्यवसायी हामी सबैले अब दुर्घटनालाई रोक्नुपर्छ । हाम्रंो एक एक निमेषको सावधानीले हामी बाँच्न सक्छौं, अरुलाई बचाउन सक्छौं । आजको आवश्यकता हो सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्नु र अकाल मृत्युबाट सबैलाई जोगाउनु । यसको थप विषयमा हामी सरकारलाई सवारी सम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हाम्रो देशमा लागू गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
रोटरीको १६ औं स्थापना दिवस
बाचुञ्जेल सम्म कलाकारीता क्षेत्रमा समर्पित हुन्छु ।
‘विकास र समृद्धिको लागि मेरो उम्मेदवारी’
‘आर्थिक र सामाजीक रुपान्तरण गर्ने छु ।’
बिजुली जोड्नै डेढ अर्ब लगानीको बाध्यता December 18, 2017
मलेसिया र साउदीसँगको श्रम सम्झौता अलमलमा December 18, 2017
तीन दर्जन कम्पनीमाथि छानबिन December 18, 2017
एकैपटक सवा सय पाइलट लिँदै हिमालय December 18, 2017
पौषे औंशीको अवसरमा बेत्रावतीमा श्राद्ध गरिँदै December 18, 2017
‘घिनघिन मादल’ बनाउँदै आए सौगात December 18, 2017
कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको भन्दै अधिकृतको कक्षमा ताला December 18, 2017
जन्मदिनमा दाइजोविरुद्ध जागरण December 18, 2017
मोबाइलले फिल्म खिच्ने प्रतियोगिता December 18, 2017
जीवनको खुशी खोज्दै नम्रता चित्र December 18, 2017
मिर्गाैला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई भत्ता December 18, 2017
स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराद्वारा छानविन गर्न सिनेट बोलाउँदा पदाधिकारी नआएको स्पटोक्ति December 18, 2017
निर्वाचन विरोधी गतिविधिका आरोपी तारिखमा छुटे December 18, 2017
देशभर अधितकम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रम जारी December 18, 2017
आजदेखि एभरेस्ट प्रिमियर लिग December 18, 2017
(c) Kavre Times Weekly Designed: TCS